AA အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းမှု မရှိစေရေး ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေမှုများပြုလုပ် - Yangon Media Group
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း AA အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းမှုမရှိစေရေးနှင့် ဒုစရိုက်မှုများကင်းဝေးစေရန် မကွေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်ကာ နေပြည်တော်နှင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနယ်စပ်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်မှစတင်၍ ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
”အခုလို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ဆောင်ရွက်မှသာ AA အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းတာတွေမရှိ တော့ဘဲ ဒုစရိုက်မှုတွေကျဆင်းမှာ ဖြစ်တယ်”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့သစ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောသည်။ အခုလိုဆောင်ရွက်ရာတွင် မကွေးခရိုင်ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးကြီးက ဦးဆောင်ကာ မှုခင်းကင်းဝေးစေရန် နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီမှ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအထိအလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရှာ ဖွေ ဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
အမည်မသိသူတစ်ဦး ဖုန်းဆက်ခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားသော ဆိုင်ကယ်တက္ကစီမောင်းသမား ဆိုင်ကယ်လုယက်ခံရ??
ဘန်ကောက်မြို့တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှစ်သစ်ကူးအကြို ဆုတောင်းမေတ္တ
ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ တရားမဝင် အမဲသားခြောက် အိတ် ၇ဝ နှင့် တရုတ်လုပ် မုန့်မျိုးစုံမ??
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အလွန် NLD ၏ခေါင်းဆောင်ဆက်ခံ မှုပုံစံမှာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်?